अन्तर्गतको स्थानान्तरण | Law & More B.V. | नेदरल्यान्ड्स
ब्लग » उपक्रमको स्थानान्तरण
यदि तपाईं कम्पनी कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ वा कसैको कम्पनी लिने योजनामा ​​हुनुहुन्छ भने, तपाईं यो कुरा लिनुहुन्छ कि यो अधिग्रहण पनि कर्मचारीमा लागू हुन्छ वा हुँदैन। किन कम्पनी लिईयो र कसरी टेकओभर लिइएको हो भन्नेमा निर्भर गर्दै, यो आवश्यक हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। उदाहरण को लागी, के कम्पनी को एक हिस्सा को एक कम्पनी द्वारा कब्जा छ कि यस्तो व्यापार गतिविधिहरु संग थोरै अनुभव छ? त्यो अवस्थामा, विशेष कर्मचारीहरूलाई लिनु उचित हुन्छ र तिनीहरूलाई उनीहरूको सामान्य गतिविधिहरू गर्न अनुमति दिन। अर्कोतर्फ, त्यहाँ दुई समान कम्पनीहरूको मर्जर लागत बचाउनको लागि छ? त्यसो भए केही कर्मचारीहरू कम वांछनीय हुन सक्छन्, किनकि केहि पदहरू भरेका छन् र श्रम लागतमा पनि पर्याप्त बचत गर्न सकिन्छ। कर्मचारीहरूलाई लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा 'विनियोजनको कार्यान्वयन' अवधारणामा निर्भर हुन्छ। यस लेखमा हामी यो व्याख्या गर्दछौं कि यो अवस्था कहिले हुन्छ र नतिजा कस्तो हुन्छ।
जब त्यहाँ उपक्रम को एक हस्तान्तरण छ?
जब त्यहाँ हस्तान्तरण को एक हस्तान्तरण छ डच सिविल कोड को सेक्शन 7: 662 बाट अनुसरण गर्दछ। यो सेक्सन भन्छ कि त्यहाँ एक सम्झौता, मर्जर वा एक आर्थिक एकाई को विभाजन को परिणाम को रूप मा एक हस्तान्तरण हुनुपर्छ यसलाई कायम राख्छ पहिचान। आर्थिक एकाई भनेको "संगठित संसाधनहरूको एक समूह हो, आर्थिक गतिविधि अनुसरण गर्न समर्पित, चाहे त्यो गतिविधि केन्द्रीय वा सहायक हो"। टेकओभरहरू अभ्यासमा विभिन्न तरिकाले गरिन्छ, यस कानुनी परिभाषा स्पष्ट दिशा निर्देशन प्रदान गर्दैन। यसैले यसको व्याख्या कडा परिस्थिति मा निर्भर गर्दछ।
न्यायाधीशहरू उपक्रम हस्तान्तरणको तिनीहरूको व्याख्यामा सामान्यतया प्रशस्त हुन्छन् किनकि हाम्रो कानुनी प्रणालीले कर्मचारीहरूको सुरक्षालाई ठूलो महत्त्व दिन्छ। अवस्थित केस कानूनको आधारमा, यसैले यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि अन्तिम वाक्यांश 'आफ्नो पहिचान कायम गर्ने आर्थिक संस्था' सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो सामान्यतया कम्पनी को एक हिस्सा को स्थायी अधिग्रहण र सम्बन्धित सम्पत्ति, व्यापार नाम, प्रशासन र, अवश्य पनि कर्मचारीहरु लाई चिन्ता गर्दछ। यदि यसमा केवल एक व्यक्तिगत पक्ष संलग्न छ भने, त्यहाँ उपक्रमको प्रायः स्थानान्तरण हुँदैन, जबसम्म यो पक्ष उपक्रमको पहिचानको लागि निर्णायक हुँदैन।
संक्षिप्तमा, सामान्यतया त्यहाँ उपक्रमको स्थानान्तरण हुन्छ जतिखेर अधिग्रहणमा आर्थिक क्रियाकलाप पूरा गर्ने उद्देश्यसहित एक उपक्रमको पूरा अंश समावेश हुन्छ, जुन अधिग्रहण पछि राखी राखिएको आफ्नो पहिचानबाट पनि चिनिन्छ। तसर्थ, एक अस्थायी चरित्रको साथ एक (a को भाग) व्यवसायको स्थानान्तरणले चाँडै उपक्रमको स्थानान्तरण गठन गर्दछ। एक केसमा जहाँ स्पष्ट रूपमा कुनै उपक्रमको हस्तान्तरण हुँदैन सेयर मर्जर हो। यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरू उही कम्पनीको सेवामा नै रहन्छन् किनकि सेयर होल्डर (हरू) को पहिचानमा मात्र परिवर्तन हुन्छ।
उपक्रमको स्थानान्तरणको नतिजा
यदि त्यहाँ उपक्रमको स्थानान्तरण छ भने, सिद्धान्तमा, आर्थिक गतिविधिको हिस्सा बनाउने सबै कर्मचारीहरू रोजगार सम्झौताको शर्त अन्तर्गत हस्तान्तरण गरिन्छ र सामूहिक सम्झौता अघिल्लो नियोक्तासँग लागू हुन्छ। त्यसकारण नयाँ रोजगार सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छैन। यो पनि लागू हुन्छ यदि अर्न्तगत को स्थानान्तरण को आवेदन को बारेमा दलहरु सचेत छैन र जो कर्मचारीहरु को लागी हस्तान्तरण को समय मा ट्रान्सफर जानकारी थिएन। नयाँ रोजगारदातालाई उपक्रमको स्थानान्तरणका कारण कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्न अनुमति छैन। यसबाहेक, अघिल्लो नियोक्ता नयाँ रोजगारदाता सँगै एक वर्षको लागि उत्तरदायी छ रोजगार रोजगारबाट अनुबन्धनको दायित्व पूरा गर्नका लागि उपक्रमको स्थानान्तरण अघि उत्पन्न भयो।
सबै रोजगार सर्तहरू नयाँ रोजगारदातालाई हस्तान्तरण हुँदैन। निवृत्तिभरण योजना यसका लागि अपवाद हो। यसको मतलब यो हो कि रोजगारदाताले नयाँ कर्मचारीहरूलाई पनि त्यस्तै पेन्सन योजना लागू गर्न सक्दछन् जुन यसका वर्तमान कर्मचारीहरूलाई गर्दछ यदि यो स्थानान्तरणको लागि समयमै घोषणा गरियो भने। यी परिणामहरू सबै कर्मचारीहरूमा लागू हुन्छन् जससँग स्थानान्तरण कम्पनी स्थानान्तरणको समयमा सेवामा छ। यो काम, बिरामी वा अस्थायी सम्झौताको लागि अयोग्य भएका कामदारहरूलाई पनि लागू हुन्छ। यदि कर्मचारी उद्यमको साथ स्थानान्तरण गर्न चाहँदैन भने, उसले स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्न सक्छ कि ऊ / उनी रोजगार सम्झौता समाप्त गर्न चाहन्छ। कम्पनीको स्थानान्तरण पछि रोजगार स्थितिको बारेमा कुराकानी गर्न सम्भव छ। यद्यपि पुरानो रोजगारी सर्तहरू पहिले सम्भव हुनुभन्दा पहिले नयाँ रोजगारदातालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
यो लेख वर्णन गर्दछ कि उपक्रम हस्तान्तरण को कानूनी परिभाषा व्यवहार मा धेरै नै चाँडो पूरा हुन्छ र यो उपक्रमका कर्मचारीहरु प्रति दायित्व को बारे मा प्रमुख परिणामहरु छ। उपक्रमको स्थानान्तरण भनेको त्यो अवस्थामा हुन्छ जब कुनै उद्यमको आर्थिक एकाईले अर्को अस्थायी अवधिको लागि लिन्छ, जसद्वारा गतिविधिको पहिचान सुरक्षित हुन्छ। उपक्रम हस्तान्तरण को नियम को परिणाम को रूप मा, लिने व्यक्ति ले पहिले नै लागू को रोजगार शर्त अन्तर्गत हस्तान्तरण उपक्रम को कर्मचारीहरु को रोजगार दिनु पर्छ। नयाँ रोजगारदातालाई उपक्रम हस्तान्तरणको कारणले कामदारहरूलाई बर्खास्त गर्न अनुमति छैन। के तपाईं उपक्रम हस्तान्तरणको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ र यो नियम तपाईंको विशेष परिस्थितिमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? त्यसोभए सम्पर्क गर्नुहोस् Law & More। हाम्रो वकिलहरू कर्पोरेट कानून र श्रम कानूनमा विशेषज्ञ छन् र तपाईंलाई मद्दत गर्न खुशी हुनेछ!
अघिल्लो पोस्ट इजाजतपत्र सम्झौता
अर्को पोस्ट दाता सम्झौता: तपाइँलाई के थाहा हुनु आवश्यक छ?